Warmurtiyeed laga soo saaray Shirka ganacsiga Galmudug oo lagu qabtay Dhuusamareeb. – Radio Muqdisho
Warmurtiyeed laga soo saaray Shirka ganacsiga Galmudug oo lagu qabtay Dhuusamareeb.
Shir looga hadlayay horumarinta Ganacsiga deegaannada Galmudug oo muddooyinkii dambe ka socday Magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu soo gabagabeeyay Magaaladaasi, kaasi oo ka qeybgaleen ganacstada Gobolka Madax ka tirsan Maamulka Galmudug.
Halkaan ka aqriso Warmurtiyeedka kasoo baxay Shirkaasi wadatashiga.
Wasaaradda Arrimaha Dastuurka oo tababar u furtay qaar kamid ah shaqaalaha Wasaaradda “SAWIRRO”